Vaovao - Soso-kevitra vitsivitsy momba ny WPC
Ny vokatra vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo (WPC) dia mankafy ny tombony azo avy amin'ny hazo sy ny polymer material, saingy afaka amin'ny lesoka izy ireo. Ny fitaovana WPC dia matanjaka be, manakana ny lo, ny fanoherana ny toetr'andro, ny fanoherana ny slip. Azo ampiasaina amin'ny tontolo, zaridaina, villa ary sehatra hafa ivelan'ny trano. Miaraka amin'ny fahaiza-manao tsara dia be dia be ny olona mampiasa fitaovana WPC handravaka ny faritra misy azy ireo. Fa fantatrao ve ny torohevitra sasany momba ny famokarana WPC?
1. Ny mpanjifa sasany dia maniry fatratra ny hahazo ny decking WPC raha vao mametraka baiko. Aza dia manam-paharetana ry namako malala, ny orinasa WPC dia mila fotoana hamokarana ny fametahana WPC anao. Ka aza manosika ny orinasa hamokatra ny takelaka WPC anao haingana, Raha esorina haingana loatra ny akora, ny toetra mekanika an'ny Fitaovana WPC hiharatsy rehefa vita izany, nefa tsy midika izany fa miadana kokoa ary tsara kalitao.
2. Araka ny fantatsika, ny vokatra WPC dia azo averina madiodio tanteraka sy tontolo iainana.So angamba ny mpanjifa sasany dia hiahiahy momba ny kalitaon'ny kalitaonay.Koa nanolo-tena taminao izahay fa tsy hampiasa fitaovana azo averina intsony.Endriky ny baiko rehetra dia hampiasa fitaovana vaovao izahay Ary hizaha toetra ny fitaovana isika rehefa mividy ilay fitaovana, toy izany ihany, azontsika atao ny miantoka ny kalitaon'ny tsara amin'ny fametahana WPC.
3. Ny olana mahazatra indrindra amin'ny vokatra WPC dia mihalefy. Toy ny toetr'andro manokana, toy ny tara-masoandro avo izay mahatonga ny vokatra rehetra ho mora very ny lokony .Raha ny firenenao dia manana toe-javatra mitovy, mila miteny amin'ny orinasa izahay. Afaka manampy izahay Fanampin'ny fanoherana UV bebe kokoa, dia hahatonga ny tabilao WPC hihena kokoa ny fanoherana. Na inona na inona toe-javatra, ny vokatra dia afaka mitazona ny loko farafaharatsiny 5-10 taona. Fahaizana tena tsara io.
Ary ahoana ny amin'ny fihinanao ny fametahana endrika WPC miaraka amin'ny hazavako? Raha tsy azonao atao ny miandry ny fametahana plastika vita amin'ny hazo, alao haingana ary mifandraisa aminay!
Fanapahan-tsokosoko WPC, Fanesorana ivelany WPC, Rihana fametahana WPC, Fanesorana WPC ivelany, fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fitaovana WPC,